XOG HOOSE: Muxuu ku saabsanaa Kulankii dhexmaray Mucaaradka DF iyo Somaliland ee ka dhacay Nairobi? – Puntlandtimes
NAIROBI(P-TIMES) – Saacadihii lasoo dhaafay si weyn ayaa baraha bulshada loogu falanqeeyey sawir ay wadajir u galeen xubno katirsan xukuumadda iyo Xisbiyada Somaliland oo isku dhinac iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ah hogaamiyaha Xisbiga ugu weyn ee sida adag u dhaliila dawladda Faderaalka ee Soomaaliya.
Kulanka oo ka dhacya mid kamid ah Hotelada Nairobi, waxaa la sheegay in lagu soo qaaday wada hadalada Soomaaliya & Somaliland oo ay dawladda Soomaaliya aad uga gaabisay mudadii ay xaafiisyada joogeen Madaxda ugu sareysa.
Warsidaha Puntlandtimes.com wuxuu ogaaday in kulanka lagu soo qaaday sidii miro-dhal looga dhigi lahaa in wadajir loo wajaho arrimahaas, mana ka marneyn in dhinacyada wada hadlayay ay marar badan isla soo qaadayaan sida ay uga soo horjeedan dawladda Faderaalka ee Soomaaliya.
Dadka falanqeeya siyaasadda ayaa rumeysan in Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu ka mid yaha dadka la dhacsan arrimaha Somaliland ay sameynayso ee ay uga sii durkayso midnimada Soomaaliya, balse isaga ayaa iska difaacay eedaha noocaas ah, oo uu sheegay in ay yihiin kuwa aan sax aheyn.
Xukuumadda Muuse Biixi ayaa laga sugayaa in ay Faahfaahin ka bixiso kulanka Wasiirkeeda Arrimaha gudaha Maxamed Kaahin oo kamid ah Saaxiibada dhaw ee Muuse Biixi iyo Gudoomiyaha Xisbiga UCID Faysal Cali Waraabe ay kula kulmeen siyaasiin ka soo jeeda Koonfurta Soomaaliya oo waliba mucaarad ku ah dawladda Faderaalka.
Cali Khaliif Galeydh ayaan ka bartay maahmaah igu cusbeyd oo aheyd
Nin Dameer Dabadii ka degay meel u dhaantuu waayey.
Somaliland Cabdiraxmaan C Shakuur meel u dhaanta ayey waayen.
Nasiib darraduse waa inuusan waxba kusoo kordhin kareyn.
Hadii hargeisa lagu Canmo miyay wax dhib ah kuu leeyahay mise hadaad sharaysan doontaa
Farmaajo isgaa laga kariwaayey faragelinta uu ku hayo Somaliland. Fataalida Cabdiraxmaan Ciro miyeydaan arag. FD guri quraarad ka sameysan ayey ku jirtaa hadana dhagxan ayey tuurayaan